Miankohofa amin’Ilay mpanavotra
Tsy mandeha irery ny fampianarana momba ny famoronana, indrindra ao amin'ny TV, na dia manan-danja lehibe amin'ny finoantsika aza. Matetika no miaraka, eny mifamatotra mihitsy aza, amin'ny foto-pampianarana momba ny fanavotana izany. Ny antony raha tsorina dia izao: tsy ampy ho an'izao tontolo izao feno fahotana sy fahafatesana raha ny famoronana fotsiny. Miaina isika, mitolona, ianjadiam-pahoriana, dia inona no tohiny? Maty isika, tsy misy hafa amin'ny biby rehetra izay miampatra eny an-dalana ny fatiny.
Mampieritreritra lalina izany.
Noho izany dia manana ny fampianarana momba ny fanavotana koa isika, izany hoe manana Jesôsy Kristy voahambo teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, ho ivon'ny finoantsika manontolo.
Vakio ny Jao.1:1-14. Inona no ambaran'io andininy io momba an'i Jesôsy sy izay nataony ho antsika?
Jereo ihany koa ny hafatry ny anjely voalohany: "Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa ea anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano" - Apôk. 14:6,7. Mariho fa mifandray mivantana amin'Andriarnanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy ny "filazantsara mandrakizay". Ary rehefa tsapantsika fa Ilay Andriamanitra nahary antsika ihany no Ilay Andriamanitra tonga nofo, izay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny Tenany, dia tsy mahagaga raha voataona hiankohoka Aminy isika. Inona ihany koa no tokony ho fihetsitsika manoloana ny fahafantarana ny tena toetr'Ilay Andriamanitsika?
I Jesôsy Izay voahombo teo amin'ny hazo fijaliana no tokony ho ivon'ny fampianarantsika rehetra. Tokony ho tafiditra ao anatin'izany fampianarana izany koa ny momba ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Ny fiavian'i Kristy voalohany mantsy, raha sarahina amin'ny fiaviany fanindroany, dia tsy mitondra soa ho antsika loatra. Sa tsy marina izany? Azo atao ny milaza, araka ny Soratra. Masina, fa mitambatra ho drafitra tokana ny fiavian'i Kristy voalohany sy ny fiaviany fanindroany, dia ny planin'ny famonjena izany.
Saintsaino ny amin'ilay hevitra voalaza ao amin'ny Jao.1, fa Izy Ilay nahary "izao zavatra ary" rehetra izao (Jao. 1:3) no Ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika koa. Nahoana no tokony hitaona antsika hiankohoka Aminy izany?